Xaggee ku taal warshadda sanceysa oo duulisa ‘Diqsiga Danabeysan (Trolls)?’ – Radio Daljir
Febraayo 19, 2020 5:51 g 0
Magac aan magac ahayn oo meel loo raco lahayn oo lambaro dabasocdaan oo qaar astaantu tahay calanka ama xiddigteena cad ee shan geeska ah ama labadaas midkood oo aan cidina ka waddanisanyen weerar joogto ah ma kula beegtay? Ma ka yaabtay akoono hal maalin la wada furay oo wada Axmed, Cumar iyo Maxamed ah iyo wada magac Soomaali? Ma ka yaabtay kumaannaan akoon oo la wada furay dabayaaqadii sannadka 2019 iyo biloowgii sannadkan 2020? Ma ka yaabtay waddaniga adiga ku eegta markii aad afkaar ama xog ku qaybiso baraha bulshada oo aan harna harsan, habeenna seexan?
Ma moodday Soomaali Soomaalinimadu dhab ka tahay? Ma moodday Soomaali raba wanaagga Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed? Ma moodday waddani wax saxaya oo dalka iyo dadka u doodaya?
Ma ka yaabtay sida uu qolo gooni ah u difaaco, siyaasad gooni ah u wareejiyo, qolo gooni ah u beegsado, ama siyaasadda taabacsan ajandihiisa uu joogto ugala ag wareego shacabka iyo haldoorka Soomaaliyeed? Ma la yaabtay sida uu mar kasta hal-qabsiga “Soomaali dhib iyo dowlad la’aan waa ay ka daashay oo maanta waa in la taageero …” iyo kalmadahaas kuwo lamid ah u isticmaalo, laakiin aan Soomaali sax lagu qorin, baraha bulshadana si jooogto loola beegto?
Ma moodday waddani wax saxaya oo dalka iyo dadka u doodaya?
Ha moodin! Ma aha waddani (ama sida ay badanaa u qoraan ‘wadani’) waddaniyadu dhab ka tahay; laakiin waa waddani dowlad kale oo ka shaqeeya danaha dowladdiisa. Waa waddaniyiin badankoodu ka hawlagalaan xafiisyada wardoonka iyo sirdoonka ee Itoobiya (Information and Security Agencies). Itoobiya kaliya ma aha e waxaa jira waddaniyiin dowlado kale oo ayana ajandahooda joogto ula meeraysta baraha bulshada. Laakiin waddaniyiinta danbe ma aha kuwo u Soomaaliyeysan sida kuwa sirdoonka Itoobiya.
Waddaniyiinta Itoobiya waa kuwo aan harna harsan, habeena seexan. Waa waddaniyiin qaybtood dul fadhiyaan kombuutero laga hago kumannaan ‘diqsiga danbeysan’ ee loo yaqaan ‘bots’ ama ‘robots’ oo wada waddaniyiin ah.
Qayb kale waa waddaniyiin qof walbaa dul fadhiyo dhowr kombuuter oo kombuuter kastaa yahay kumannaan Soomaaliyeed oo Axmed, Cumar iyo Maxamed wada ah.
Ma aha waddani Soomaaliyeed, laakiin waa waddani dal shisheeyo oo halbeeggiisu yahay “qalad, wareeri oo muquuni waddaniga Soomaaliyeed” asaga oo iska dhigaya waddani ka waddanisan waddaniga dhabta ah ee Soomaaliyeed, oo dabadeedna waddaniga Soomaaliyeed ka dhigaya mid cadow ku ah Soomaaliya iyo Soomaalinimada.
Waddaniga shisheeya waa mid beegta 17 illaa 25 jirka Soomaaliyeed ee aan hore codka u lahayn, cadaawad qabiil iyo mid gobol ku barbaaray, kuna dhiiriya in ay maanta cod leeyihiin, laakiin codkiisa (codkeeda) ay diidanyihiin “qolo hebla iyo gobol hebel.”
Waxba kama duwana wixii Ruushku sannadkii 2015 illaa iyo 2016 la beegsaday Mareykanka waqti doorashadii iyo loolankii Trump iyo Hillary Clinton. Diqsiga danabeysan ee Ruushku waxa uu waqtigaas codeeyaha Mareykanka ka dhaadhiciyey in Hillary Clinton tahay cadowga koowaad ee Mareykanka oo bal wax kale iska daa e ay Hillary Clinton Yuuraaniyamkii Ameerika ku wareejisay Ruuskha. Wixii dhacay ma aha wax maanta laga sheekeyn karo.
Haddii aadan la socon tii Mareykanka, daris tii Ingiriiska iyo sida diqsiga danabeysan uu ‘Brexit’ ku dhaliyey, Ingiriiskana qof-qof la isaga horkeenay, deedna Ingiriiska laga horkeenay Yurub, oo maanta Ingiriis bannaanka ka yahay Yurub.
In kasta oo taknoolajiyad ahaan ay waddaniyiinta Soomaaliya ku soo duulay aad u liitaan, haddana waxa maanta Soomaali kaga socda baraha bulshada kama duwana wixii lala beegtay Mareykan iyo Ingiriis, oo haddana laga mirodhaliyey.
Laakiin Soomaali maxay kaga nugushahay Mareykan & Ingiriis?
Siyaasaddii Soomaaliya iyo dowladdii la rabay in ay dalka ka difaacdo duullaanka waayaha cusub iyo taknoolajiyada casriga ah waxa ay ku milantay siyaasaddii burburineysay Soomaalinimada. Kaba sii daran e, Soomaaliya ma leh heykal dowladnimo iyo hay’ado dowladeed oo fahmi kara waxa socda oo markaas ugu yaraan shacabka wacyigaliya. Ku dar oo waxa la beegsanayaa waa 25 jirka Soomaaliyeed oo ku dhawaad 63% aysan helin fursad waxbarasho, waalidkood oo aan wax qorin, waxna akhrina maanta u ah indho ay wax ku arkaan iyo dhego ay wax ku maqlaan.
Maanta Soomaaliya lama kala sooci karo waddaniga dalka difaacaya iyo kan burburinaya. Laakiin mid baa Soomaali ku badbaadi doontaa: Soomaaliya waa dal federaal ah oo maanta ay adagtahay in danaha cadowgu ay waqti gaaban ka fulaan gobol kasta oo Soomaaliya, laakiin waqtiga fog Soomaali iyo Soomaaliya waa loo baqaa.
Haddii aysan Soomaali maanta fahmin sida loogu soo duulay oo aysan ilaashan kuna mintidin nidaamka federaalka way sahlantahay in si fudud Soomaali la isaga horkeeno, sidii kal hore oo kale. Haddii aad tusaale u baahantahay meel fog ha aadin ee siyaasadda maantadan taagan daris. Haddii aysan Soomaali maanta federal ahayn, waxa dhacayaa waxba ma dhaameen wixii dhacay sannadihii 1990-1991.
Soomaaliya maanta ma leh dowlad difaacda
Waddani kasta oo Soomaaliyeed oo u istaaga difaaca dalkiisana waxaa beeninta warkiisa iyo kahortagga wacyigiisa harna aan u harsan, habeenna aan u seexan oo ka dagaalamaya diqsiga danbeysan ee fadhigiisu yahay xafiisyada Addis Ababa ee wardoonka iyo sirdoonka Itoobiya. Ma lihin xafiisyadaas oo kale iyo dowlad, mid dhexe iyo mid goboleedba, oo wacyigalisa shacabweynaha Soomaaliyeed; laakiin waxaan shaki ku jirin in guutooyin danabeysan oo waddaniyiin dhab ah oo Soomaaliyeed ay har iyo habeen u taaganyihiin una istaagi doonaan kahortagga diqsiga danbeysan ee ku soo duulay Soomaaliya.
Shirkadaha Bandhiga Carwada Ganacsiga Puntland (Daawo)
Wasiirka Maaliyadda Itoobiya Axmed Shiddo oo booqasho ku tegey Hargeysa